Cawad Suldaan Maxamuud Cali Shire oo ka Hadlay Xaaladaha Deegaanka Sanaag | maakhir.com
Bosaaso:- Cawad Suldaan Maxamuu Cali Shire ayaa waxa uu ka mid yahay dadka sida wayn looga Dameeyo Gobolka Sanaag waxana uu ka warbixiyay xaalada Guud ee Deegaanka Sanaag,isaga oo si qota dheer uga warbixiyay, waxa uu sheegay inay Deegaanka ay ka jiraan Abaaro xun, oo dhamaan saameeyay. Wuxuuna waraysigu u dhacay sidatan:
Su’aal: Xaaji bal marka hore warbixin kooban naga sii xaalada gobolka?
Jawaab: Bismilaah een xaalada gobolka idinba warkiisa waad haysaan, waxaa ugu weyn oo aan hada tilmaamayaa abaaraha baahsan ee ka jira gobolka oo aad warbaahintaba ka maqasheen, waana abaara baahay runtii oo waxyeelo gaarsiiyey dad iyo duunyaba, waxayna u baahantahay in wax laga qabto oo dadkaa iyo duunyadaa loo gurmado abaaruha iyo biya la’aantu haysato, xaga nabadgelyada aad buu u deganyahay gobolku oo wax dhiba kama jiraan, adeegyadii kalena gaabisba ha ku jiree waa ay shaqeeyaan, in kastoo dhanka caafimaadka ay adeegyada caafimaadku aad u yaryihiin.
Su’aal: majirtaa wax khasaare nafeed ah oo ay abaarahaasi geysteen?
jawaab: khasaare waa jiraa oo xoola badan baa u dhintay laakiin, ilaa hada nama soo gaarin dad u geeriyooday, laakiin xoolo baad iyo biya la’aan u dhintay baa jira, hadii ay sii daba dheeraadaan oo aan taakulooyin lala soo gaadhina waa ka sii darasaa.
Su’aal: Majirtaa wax mucaawino ah oo ilaa hada lagaarsiiyey gobolka oo loogu gurmanayo dadka iyo duunyada, ha ahaato mid maamul ama mid hay’adeed?
Jawaab: maya ma jiraan wax mucaawino toos ah oo la gaarsiiyey gobolka, marka laga reebo qalab ay dawladu gaarsiisay ceel riiga oo magaalada xingalool ku yaala, oo markii hore qalabkii ka xumaaday intaa uun baan sheegi karaa, intaana runtii waa lagu liibaanay laakiin majiraan wax mucaawino ah oo kale oo lagaarsiiyey gobolka.
Su’aal: Hay’adaha qaarkood waxay yiraahdaan gobolka kama jiro amaan aan isku halaynkarno,sidaa darteed baanu u tegiweynay goblka, taa maxaa kaga jawaabasaa?
Jawaab:Waxaa anagu waxaanu u aragnaa waxyaabo lagu marmarsiinyoonayo, gobolkuna waa amaan waana gobolada ugu nabadgelyada badan dalka,wax dhibaata ahna kama jiraan una malaynmaayo in ay hay’aduhu nabadgelya la’aan u tegiwaayen gobolka waayo waxayba tagaan meela ay xabadu ka dhacaso oo madaafiic laysku garaacayo, marka mataalo nabadgelya la’aan ay ku marmarsiinyoodaan
Su’aal: Ugu danbayntii xaaji maxaa ugu baaqasaa maamulka, Hay’adaha’iyo qurba joogtaba?
Jawaab: Waxaan ugu baaqayaa maamulka puntland iyo hay’adaha caalamiga ahbain si dhakhsa ah ay dadka iyo duunyada abaaruhu haystaan ay wax ula soo gaadhaan oo dadkaa iyo duunyadaa dhibaataysan loo gurmado, inta aanay dhibaatadu intaa ka sii badan, hay’adahana baaq aan u jeedinayaa waxaa weeye inta ay iska dhaafaan waxyaabaha ay ku hadaaqayaan waa inay gobolka ka hawlgalaan, oo ay yimaadaan ay kormeer ku sameeyaan bal ha arkeen nabadgela xumada ay sheegayaan inay jirto iyo inkale. waadna mahadsantihiin.
waxaa waraysiga Qaaday C/qaadir jama maxamed kaarshe
« Nuur Cadde ayaa ka hadlay Nabad ku soo dabaalida Dalka Somaliya ee uu xusul duubka ugu jiro
Marakab AYl lagu Haystay ayaa Maanta ooda laga qaaday ka dib markii ay Budhcadii qaadatay Lacag »